RASMI: Denmark Oo Iska Jabisay Inkaar Heysatay 29 Sannadood - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRASMI: Denmark Oo Iska Jabisay Inkaar Heysatay 29 Sannadood
RASMI: Denmark Oo Iska Jabisay Inkaar Heysatay 29 Sannadood
July 3, 2021 Saed Mohamed Wararka Ciyaaraha Maanta, Kulamada Caalamiga Ah 0
Xulka Denmark ayaa markii ugu horeysay tan iyo sannadkii 1992kii u soo baxday semi-finalka koobka Qaramada Yurub ka dib markii ay caawa 2-1 kaga talaabsadeen xulka Czech Republic oo ay isku arkeen wareega sideed dhamaadka.
Labo gool oo ay dhaliyeen qeybtii hore ee ciyaarta islamarkaana ay uga mahadcelinayaan Thomas Delaney iyo Kasper Dolberg ayaa ugu filnaatay Denmark inay sii wadato wacdaraheeda xagaagan iyagoo haatan semi-finalka ku sugaya xulkii caawa soo gudba England iyo Ukraine.
Czech Republic oo ciyaar fiican soo bandhigtay qeybtii labaad ee ciyaarta ayaa waxaa gool u soo celiyay Patrik Schick. Schick ayaa dhaliyay shan gool shan kulan uu u saftay xulkiisa tartankaan.
29 sannadood ayaa laga joogaa markii ugu danbeysay ee ay Denmark soo gaarto semi-finalka koobka Qaramada Yurub taasoo ka dhigeysa inay yihiin xulka waqtiga ugu dheer ay ku qaadatay inay semi-final yimaadaan.
Denmark waxay garoonka Wembley Arbacada kula dheeli doonaan xulkii soo baxa England ama Ukraine caawa.
Semi-finalka kale ee koobka Qaramada Yurub wuxuu dhexmarayaa Spain iyo Italy